Home - Keenyaa.com
Dhaabbata Tajaajila web Design fi App Development kennu
Addunyaa dijitaalaa irratti yaada fi hawwii kee dhugoomsuuf ni hojjanna. Akka fedha keetin, kafaltii gad aanaan si tajaajilla.
Tajaajiloota kenninu keessaa:
Nuti tajaajila online irraa hedduu laanna. isaan keessaa gurguddoon web design (marsaariitii ijaaruu), App developer (moosaajii ijaaruu) dha. Tajaajiloota xixiqqaa keessaa Logo/Asxaa, introo (vidiyoo gabaabaa), Postera adda addaa fi kanneen biroo dhaabbataafis ta’ee namoota dhuunfaaf ni hojjanna.
Tajaajila qulqullina ol'aanaa qabu yeroo gabaabaa keessatti ni hojjanna.
Barbaachisaa ta'ee yoo argame, Hojiilee hojjannu hundaaf Baatii 6-12 bilisaan deeggarsa suphuu ni taasifna.
Yaada kee sirraa fuudhuu qofaa miti. Hojii siif hojjatamu irratti Gorsa addaa bilisaan siif kennina.
Tajaajila web Design
Yeroo ammaa website (marsaariitiin) Namoota dhuunfaaf ykn Dhaabbataaf hedduu barbaachisaadha. Namni/dhaabbatni tokko online irratti bakka tajaajila isaa itti beeksifatuu fi Qabiiyyee isaa ol kaayatu qabaachuu qaba jennee amanna.
Tajaajila App Development
Yeroo ammaa bilbila ammayyaa keenya hunda irratti kan argamu gosa App/moosaajii hedduutu jira. Guyyaa tokko osoo gosa App akkanaa jiraatee jettee yaaddee beektaa? Qabiiyyee gosa adda addaa Harkaa qabdaa? Nuti yaadaafi hawwii kee dhugoomsuf ni hojjanna.
Copyright © 2022 Keenyaa.com
Powered by keenyaa.com Tech